Proverb Mietaketaka foana ny aketa, mirisarisa foana ny adrisa, fa tsy enina anay mitratraingo. [Rajemisa 1985]
Proverb Mihaotraotra foana. [Veyrières 1913 #6454]
Proverb Mikitapotapoko foana hianao ! [Veyrières 1913 #2307]
Proverb Mipasoka ny efa malama ka ny sandry foana no vizaka. [Rinara 1974 #2366]
Proverb Mitonanaka foana tahaka an--dRafotsibe voadakan' osy. [Veyrières 1913 #1887, Cousins 1871 #1881]
Proverb Piapiaka foana ny an' ny an-dambamena, fa ny an-jabo ihany no ho faty manao azy. [Rinara 1974 #3492]